ezaposwa ngomhla 06 / 04 / 2020 08 / 04 / 2020 by Androbox
Fumana indawo yakho ngexabiso eliphantsi:
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android, Reviews, yokuzonwabisa2 Comments
I-NVIDIA SHIELD TV | Ukusasaza iMedia Player ngesilawuli kude kunye noMdlalo
ezaposwa ngomhla 10 / 11 / 2017 10 / 11 / 2017 by Androbox
Fumana kwiAmazon I-TV ye-NVIDIA SHIELD
Ubomi obudityanisiweyo bakaGoogle-Fikelela kuwo wonke umxholo wakho weGoogle kunye neempawu ezibalaseleyo zekhaya noMncedisi kaGoogle, wabelane ngeefoto zikaGoogle kwi-4K, kwaye usasaze ii-apps zakho ozithandayo kwiTV yakho ngeChromecast 4K.
I-4K HDR Powerhouse -Bukela iNetflix kunye neVidiyo yeAmazon kwi-4K HDR ye-crisp, kunye ne-YouTube, iGoogle Play iimuvi kunye neTV, kunye neVUDU kwi4K. Iiapps ezinje nge-HBO Ngoku, iSpotify, kunye ne-ESPN zihlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zokuzonwabisa.
INdinga ye-NVIDIA-Ukudlala imidlalo-yeKhomputha evela kwi-PC yakho yeGeForce enikwa amandla kwiTV yakho kwi-4K HDR kwi-60 FPS. Fumana i-NVIDIA-enethiwekhi yelifu lokudlala kwimfuno kunye neGeForce MANJE. Kwaye ukonwabele imidlalo ekhethekileyo ye-Android kwi-SHIELD kuphela.
I-Smart Home Ready- uMncedisi kaGoogle uyakuvumela ukuba ulawule ukuzonwabisa kwakho kunye nekhaya lakho elikhaliphile ngelizwi lakho. Yongeza ikhonkco le-SmartThings ukunxibelelanisa izibane ngaphandle kwamacingo, izithethi, ii-thermostats, nokunye okuninzi.
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android, Reviews, yokuzonwabisaephawulweyo ikrobox, ibhokisi ye-android, Nvidia, Nvidia Shield TV3 Comments
Xiaomi MI IBHOKISI
ezaposwa ngomhla 22 / 09 / 2017 10 / 11 / 2017 by Androbox
GearBest Ibhokisi yeTV yeXiaomi Mi
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android, Reviews, yokuzonwabisaephawulweyo ikrobox, ibhokisi ye-android, Xiaomi MiUshiye uluvo
I-Mocute ye-054 ye-bluepad ye-ballet yomdlalo ongenazintambo
ezaposwa ngomhla 22 / 09 / 2017 27 / 08 / 2020 by Androbox
Fumana imali yakho apha Mocute 054
exhonyiweyo izinto ezincedisayo, Reviews, yokuzonwabisaephawulweyo Bluetooth, Controller, Ukuphatha Umdlalo, wireless, Xiaomi Mi, I-Xiaomi Mi Wireless yeBluetooth Game Handle ControllerUshiye uluvo
I-TV ye-Yoka TV KB2 ye-PRO epheleleyo
ezaposwa ngomhla 05 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Fumana ibhokisi yakho ngexabiso eliphantsi apha
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android, Reviews, yokuzonwabisa3 Comments
H96 Ukudibanisa kwakhona uHlaziyo oluGcweleyo
ezaposwa ngomhla 03 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Fumana ibhokisi yakho ngexabiso eliphantsi apha H96 Pro +
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android, Reviews, yokuzonwabisaUshiye uluvo
Umoya weMouse 3 kwi-1
ezaposwa ngomhla 02 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Fumana iMouse yakho yomoya ngexabiso eliphantsi ukusuka apha I-AirMouse
exhonyiweyo izinto ezincedisayo, Reviews, yokuzonwabisa1 Comment
Uhlaziyo lweNdalo yoNwabiso lweKhaya
ezaposwa ngomhla 18 / 02 / 2017 24 / 02 / 2017 by I-AndroBox
Yenza ntoni i-Android Box?
Njengoko igama layo libonisa, iBhokisi ye-Android isekwe kwisoftware efanayo ye-Android efumaneka kwiifowuni eziphathwayo, kodwa yasebenza ukuze isebenze kwizixhobo zokusasaza iTV.
Ibhokisi ye-Android yenza nayiphi na iTV ukuba ibeNobukrelekrele kune-smart, kufana nokudibanisa eyona fowuni okanye ithebhulethi kwi-steroids ene-screen enkulu yeTV okanye iProjektha yesikrini kunye naluphi na uhlobo lolawulo olukude njengegundane, ikhibhodi, imouse yomoya yeGyro, isilawuli somdlalo, kude okude kweTV njl ukufumana elona thuba lihle lomsebenzisi lokuzonwabisa ngekamva. Awudingi PC ebiza kakhulu okanye iiBhokisi zeMidlalo kwakhona ukuze ube nokuzonwabisa okungcono. Olona thuba lukhulu kwiBhokisi ye-Android lukhetho lokufaka nayiphi na iapp kaGoogle yokudlala kunye neRhafu.
NgeRhafu unethuba lokubukela phantse yonke into simahla ngaphandle kokubhaliswa njengemiboniso bhanyabhanya, iiMovie, amajelo e-TV ebukhoma, iiTorrents, i-Youtube njl.
Kwivenkile kaGoogle Play ungafaka nawuphi na uMdlalo we-Android kwaye uwudlale kwiTV yakho usebenzisa nayiphi na isilawuli somdlalo, ikhibhodi okanye imouse. Okanye ungasebenzisa i-Miracast inketho yokujonga isikrini sakho kwaye udlale nawuphi na umdlalo kwi-smartphone yakho kwisikrini esikhulu usebenzisa i-smartphone yakho njengomlawuli.
Ungafaka iinkqubo ze-IP zeTv ukubukela umabonakude, okanye usebenzise iNetflix
Kunye nemiboniso bhanyabhanya kunye nemidlalo bhanyabhanya, i-TV ye-Android ikuvumela ukuba udlale imidlalo, njenge-PlayStation TV kunye ne-Amazon Fire TV yenza. I-TV ye-Android iya kuxhomekeka kuVuyo lweGoogle Play ukuhambisa umxholo, kodwa ukukhangela kwakhona kuya kudibanisa iinkonzo zenkampani yesithathu ezinje ngeNetflix xa kufanelekile.
Ukuba uneNetflix, iBlinkbox okanye iProper Instant Video efakwe kwi-Android TV kwaye uyawucela ukuba ujonge iifilimu ezibalaselisa i-Cate Blanchett, i-Android TV kufuneka ijonge kubo bonke ukuze babone ukuba ikho.
Ngokwemvelo, uya kuba nakho ukubukela iTV rhoqo, ukuba iyahamba inqanawa yakho.
NjengeChromecast, iTV ye-Android iphinda-phinde kabini njengomsasazi onento ayenzayo. Ke abasebenzisi banokufumana umxholo kwii-mobiles zabo okanye kwisikhangeli se-Chrome kwaye bawugqithisele kwi-TV yabo ye-Android, akukho zinkathazo.
exhonyiweyo Ibhokisi ye-Android3 Comments
I-Airmouse 4 kwi-1 eyi-T6 ekude $21.11
Xiaomi MI IBHOKISI S. $99.99 $53.75
Xiaomi MI IBHOKISI $101.43